(Dhegayso) Dowladda Puntland oo saddex milyan iyo badh ugu deeqday dhamaystirka garoonka diyaarada Garowe iyo wadada Ceel-daahir iyo Ceergaabo. | puntlandi.com
Monday, June 19th, 2017 | Posted by Pi
(Dhegayso) Dowladda Puntland oo saddex milyan iyo badh ugu deeqday dhamaystirka garoonka diyaarada Garowe iyo wadada Ceel-daahir iyo Ceergaabo.
Madaxweynaha dawlada puntland Dr Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta ku wareejiyay guddiga dhismaha Garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe lacag dhan, labo malyan iyo bar oo doollar, 2,500,0000, lacagtaas oo loogu talo galay dhammaystirka Garoonka Garoowe.
Sidoo kale, madaxweynaha ayaa ku wareejiyay guddiga dhismaha waddada ceel-daahir ilaa ceergaabo lacag dhan 1-miylan oo doolar 1,000,000 oo loogu talo galay dhammaystirka waddada Ceel daahir wajiga koowaad ee waddada ayaa hadda maraya heer Gebagebo ah waana mashruuc markii hore ku bilowday isku tashi.
Munaasabada lacagtan lagu wareejiyay ayaa ka dhacday hoolka jaamacada bariga africa ee magaalada Garoowe waxa uuna ahaa munaasabad loogu magac daray maalgalinta dawladda Puntland ee dhamaystirka garoonka diyaarada Garowe iyo wadada ceel-daahir iyo ceergaabo.
Madaxwaynaha ayaa isku gayn maanta wareejiyay lacag dhan saddex milyan iyo bar oo dollerka maraykanka lacagtaas oo lagu dhamaystirayo mashaariic muhiim u ah shacabka puntland oo qabyo ahayd.
Madaxweynaha dowladda Puntland oo munaasabada ka hadlay ayaa ku baaqay in gacmaha la is qabsado islamarkaana aan gacmo shisheeye waxba laga sugin. Madaxweynaha ayaa sheegay dowladda Kuwait inaysan ugasoo bixin sidii laga filayay taageerada ay u balanqaaday dhismaha garoonka diyaaradaha Garowe, sidaas daraadeed wuxuu cadeeyay inay dowladdu isku tashatay oo ay jeebkeeda ka bixisay maalgelinta garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe.
Codka Madaxweyanha Puntland